I-Semalt: Umhlahlandlela Omkhulu Wokuvimbela Ugaxekile Wokudlulisa Ku-Google Analytics yakho
U-Nik Chaykovskiy, isazi esivela ku Semalt , uqinisekisa ukuthi ukuthunyelwa kogaxekile kungenye yezinkinga abaphathi bewebhu ababhekana nazo manje. Isimo sasilokhu sibi kakhulu eminyakeni, okusho ukuthi othile endaweni ethile wenza imali eningi ekudaleni ugaxekile logaxekile.
Ugaxekile we-Ghost and Referral
Ugaxekile manje uye wahamba waya emibikweni ye-Google Analytics. Abakwa-Spammers babheka ukukhubazeka ohlelweni ukuze bakwazi ukuvela emibikweni yedatha yewebhusayithi. Benza lokhu ngethemba lokuthi bafaka isifiso esinqunyiwe kuze kube yilapho umphathi wewebhu evakashela iwebhusayithi yabo ukubona ukuthi bangubani kulo mbiko - camouflage passport for sale. Inkinga ukuthi ayikhulise ithrafikhi. Awukwenzi ngisho nakanjani kusukela kuba yi-bots. Basebenzisa ikhodi yokulandelela ye-JavaScrip esetshenziswa yi-Google Analytics ukudala isaziso sokuvakashelwa. Baqeda ukuhlaziya izibalo ezibalulekile njengezinga lokunciphisa nezinye izakhi ezisetshenziselwa ukuhlaziya ukuzibandakanya. Kubalulekile ukuvimbela ugaxekile wokudluliselwa uma umuntu edinga idatha eqondile ikakhulukazi uma athembele kukho ukwenza izinqumo zokumaketha.
Kuba nzima ukuvimbela ugaxekile wokudluliselwa ngokukhethekile ikakhulukazi ngoba abakwa-spammers basebenza ngokusheshisa kakhulu, banda izinga lokuhlonza ugaxekile kanye nemithombo. Kusho ukuthi abakwa-webmasters badinga ukuthuthukiswa emzamweni abawenza ekuqedeni nasekuhlwinile le mithombo. Kubaluleke nakakhulu kubantu abanamasayithi amasha abangayitholi imoto enkulu. Ukwenyuka kwamazinga okugaxekile kumasayithi anjalo kungabonisa ukwehla okungaphezulu kwalokho okungahle kube ngaphezu kwansuku zonke okuwutholayo.
Ikhasi elilodwa lilayisha amarekhodi njengokuvakasha okukodwa. Abakwa-Ghost spammers basebenzisa ikhodi yokulandelela ye-Google Analytics futhi bathumele idatha ye-traffic ngqo emibikweni, ngaleyo ndlela bahlela ukuvakashelwa. Kungathatha amasekhondi angu-0.001 ukulayisha ikhasi elilodwa kuseva endaweni ethile..Noma kunjalo, kungenzeka ukuthi baphoqelele ukuvakashelwa okungaphezulu kwekhulu kulawo ma-akhawunti we-Google kwamanye amasayithi amaningi kuwo wonke. Kulula kakhulu ukuthenga umphathi oyedwa. Uma nje abakwa-spammers beqiniseka nge-ROI, kunomonakalo omkhulu abangayenza nabo.
Izixazululo eziza phezulu
Amanye amasu ngezinye izikhathi aphumelele kangangokuthi izixazululo eziqashwe ukuvimbela ukuxhunyelwa kogaxekile akusebenzi. Omunye wabo yi-service engavamile engozini ebizwa nge-Darodar. Izindlela ezilandelayo azizange zisuse ku-GA.
Ifayela le-.htaccess. Akusebenzi kusukela ugaxekile we-ghost akuthinti isayithi
Uhlu lokukhishwa kokudluliselwa. Ayikho izibuyekezo.
Izihlungi ezingaphandle. Kuyindlela engaphelelwe yisikhathi ngoba igxile kuphela ekugaxekeni kogaxekile futhi ayibuyiseli kabusha imininingwane yolwazi yogaxekile yangaphambilini.
Isihlungi sokuxoshwa cishe siseduze ekuqedeni ugaxekile lwezokudluliselwa kweDarodar. Ukunciphisa kwayo kuphela ukuthi ayinayo uhlu oluqhubekayo lokudluliselwa kogaxekile olwenziwe njalo.
I-Puzzleing Piece engekho
Isixazululo esithatha isinyathelo sokukhomba nokuvimbela idatha yokudluliselwa kanye neyomphefumulo kufanele ibuyekezwe kakhulu, ivela kumininingwane egciniwe, futhi ibuyele emuva kolwazi oludlule. Ngokusekelwe ezingxenyeni ezintathu zesisombululo esihle, nansi okusebenzayo.
Isinyathelo 1: Ukusebenzisa izingxenye ukuze ungafaki ugaxekile
Kungcono ukusebenzisa izingxenye njengoba zingashintshi idatha unomphela. Uma umuntu engozini ehlunga abasebenzisi bokudlulisa ngesikhathi sangempela ngenkathi usebenzisa izihlungi, ayikho indlela yokuzibuyisela emuva. Kungenzeka ukwakha kudatha endala usebenzisa izingxenye, naphezu kokuthi sekude isikhathi eside kangakanani. Umuntu angawasebenzisa futhi ngokuphindaphindiwe.
Isinyathelo 2: Ukulondoloza Uhlu Lokukhishwa
I-Slack iyithuluzi labakwa-webmasters abangasebenzisa ukuqapha imithombo yokudlulisela..Ikwazisa umsebenzisi ngokuphathelene nanoma yikuphi ukuthunyelwa okusha futhi ibanika ngokushesha: kungakhathaliseki ukuthi umhlophe noma uhlu lwabantu abamnyama umthombo wokudlulisela osolisayo.
1. I-Slack ithola konke okudlulisiwe, futhi
2. Isebenzisa i-PHP ukuhlunga yonke imiphumela ngomyalo wokubala, bese uvala uhlu lokugcina kumphathi webhubhu ukuze ubone ukuthi noma yikuphi okubukeka kujwayelene. Uma kungenjalo,
3. Ihambisa wonke ugaxekile osolwayo kumzila osondayo onika umsebenzisi ithuba lokuzikhethela phakathi komhlophe noma uhlu lwabantu abamnyama. Noma yikuphi okukhethayo, kuholela esiteji 4,
4. Iphinda iqondise ekhasini eliqinisekisa isigwebo njengesiqiniseko sokukhethwa.
5. Slack bese ugcina futhi uvale wonke ama-spammers ahlonziwe ku-database
6. Ukuboniswa kokugcina kwedatha ehlanzekile kuzoba ngesakhiwo se-regex. Kopisha bese unamathisele ku-Google Analytics.
I-Slack ivumela abaphathi bewebhu ukuba babuyekeze uhlu lokungabikho okungenani izikhathi ezinhlanu ngosuku.
Eqinisweni, Izixazululo Eziningana Zingasebenza:
Naphezu kwalokhu kuyindlela eqinisekisiwe, kuzosebenza kangcono uma umphathi wewebhu ewufaka ngezinye izindlela, ukuze aqiniseke ukuthi ahlanganisa zonke izisekelo. Ngaphezu kwesixazululo esithathiwe:
Chofoza ebhokisini lokuhlola elikhuthaza iGoogle Analytics ukuba ingabikho ama-bots nezigcawu eziwaziwayo,
Faka isicelo "faka isihlungi segama lokusingatha,"
Isihlungi esihlanganisiwe okukhulunywe ngaso ngenhla sisebenza kahle ngezinye izikhathi, kodwa hhayi isixazululo esihle kakhulu ngokuhamba kwesikhathi ngoba:
Igama le-hostname spoofing alinzima ukuyenza, futhi abahlukumezi be-analytics bayayisebenzisa njengabantu abasengozini.
Uma ukusetha kungalungile, kungase kugcine ukuhlunga abathinteli beqiniso.